Kedu ka ndị na-enyocha ọkwa dị iche iche nke Amazon ga-esi nyere gị mgbasa ozi kachasị mma?
Amazon bụ ihe ịga nke ọma ma na-anọgide na-eto eto trading ebe onye ọ bụla na-ere ahịa nwere ike bulie ego na-akwalite ya ika. Ọ na-enye ọtụtụ uru maka azụmahịa e-azụmahịa nke na-enye ha nnukwu uru na ndị ahịa oge. Onye ọ bụla nwere ike ịzụlite azụmahịa ha na Amazon n'ihi na ọ na-ewe obere oge na mgbalị. Otú ọ dị, gịnị bụ ihe mere ị ga-eji nọrọ na Amazon ka ndị ahịa gị nwere ike ịchọta ngwaahịa gị? Dika Amazon bu uzo siri ike n'olu, i kwesiri ịrụsi ike n'okpuru nlekota ederede gi ma mepee mgbasa ozi ahia - large fascinators with feather. Iji nyochaa ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi gị na ịzụ ahịa, ịkwesịrị ịlele ọnọdụ gị n'usoro ọnọdụ gị. Ọ bụrụ na ị na-ere ihe karịrị ise ise, ọ ga-esiri ike ijikwa ọnọdụ ha niile aka. Ọ bụ ya mere na n'isiokwu a, anyị ga-atụle nyochaa nhazi Amazon nke dị irè nke nwere ike inye onyinye gị kachasị mma Amazon. Ma, ka anyị buru ụzọ tụlee ihe mere ọ dị oke mkpa iji soro ngwaahịa ndị dị na Amazon.
Gini mere o ji choro ichota onu ahia gi na Amazon?
Mgbe ị nwere ike ịchọpụta ihe isiokwu gị ndị echere na otú ngwaahịa gị na-eme maka ha na peeji nke ọchụchọ ọchụchọ Microsoft, ị ga-enwe ike melite njikwa nhazi gị ma dozie njehie ndị dị ugbu a. Ikwesịrị ịmepụta nyocha nkewa na inye ndị na-eme nchọpụta nke isiokwu iji chọpụta ihe ọchụchọ kachasị mkpa ma zubere maka ndepụta gị. Usoro ọchụchọ na ogologo-tail na-achọsi ike karịa ndị ọzọ ma nwee ike ije ozi dị ka ndị na-akwado ume maka ndị ọrụ nta ma ọ bụ na-adịbeghị anya. Otú ọ dị, ọ bara uru ịkọwa na usoro ọchụchọ sara mbara na-adọta okporo ụzọ karịa nyocha ọchụchọ na-adịghị mma.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji soro gị kwado kwa ụbọchị, kwa izu, ma ọ bụ kwa ọnwa. Iji mee nchọnchọ na mgbe niile, ị ga-achọ ụfọdụ ngwanrọ ịntanetị dị ka Splitly ma ọ bụ AMZInsight. Amazon ndị a na-arụ ọrụ nlekota oru nwere ike ịme ihe niile gbasara nyocha na nyocha maka ndabere gị maka ngwaahịa aha gị..
Ụfọdụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-enwe nkụda mmụọ mgbe ha na-ahụ mgbanwe na nchịkọta ọnụ ọgụgụ. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe mere ị ga - eji chegbuo onwe gị. Ọ bụ ihe a na-ejikarị emepụta ngwaahịa ndị a. Ọzọkwa, mgbanwe nwere ike ịdabere na ọkwa ịzụ ahịa niche ahịa gị, mgbasa ozi ngwaahịa, oge nke afọ, na ihe ndị ọzọ. N'ụzọ dị mma, site na iji ngwanrọ ọkachamara ọkachamara, ị ga-enweta echiche nke ihe kachasị n'usoro maka ngwaahịa gị n'oge na-adịghị anya. Ihe kachasị mma ị nwere ike ịnweta site na ngwanrọ ịntanetị bụ na ị nwere ike ịṅụrịta ọṅụ mgbe ngwaahịa gị na-ebuli elu ma nọgide na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na ha dị ike. Ọzọkwa, ị nwere ike imeghachi omume ma ọ bụrụ na ọkwa gị daa.
Ya mere, ọ dị ịrịba ama ị nweta mkpokọta nke isiokwu gị n'usoro nhazi, yabụ ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị siri ike ma bụrụ ndị na-adịghị ike nke mgbasa ozi kachasị mma gị yana ịmata otú ịkwadoro nke ọma ndị a ma ọ bụ okwu ọchụchọ ahụ.
Otú ọ dị, ngwaahịa gị bụ ọ bụghị nanị otu ọnụọgụ bara uru dị mkpa ka ị soro na mgbe niile, ma e nwekwara ihe ndị ọzọ dị mkpa dị ka ọsọ ọsọ ahịa, okporo ụzọ na nnọkọ, nyocha na ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ị nwere ike iji tinye aka na ngwaọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu Amazon. Dịka onye ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị, ọ dị mkpa ka ị na-eleba anya na usoro nhazi niile nwere ike ịmetụta ngwaahịa gị na Amazon SERP.
Ngwongwo ihe omumu nke m jiri nyere m akuko. Ọ na-adaba adaba mgbe ị nwere foto zuru oke nke ọnọdụ gị dị ugbu a ma nwee ike iji ọnọdụ dị ugbu a na nke ugbu a tụnyere.
Ya mere, enwere m ike ịsị na ndị na-eme nchọpụta na Amazon nwere ike ịchekwa oge gị ma nye gị nkọwa data kachasị mkpa na nke ziri ezi na ị ga-agba ọsọ nke ọma na Amazon.